Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Oo Xirmay – Liiska Ciyaartoyda Kala Wareegay Halkaan Ka Akhri. - jornalizem
OFFICIAL: Ciyaaryahan Michael Essien ayaa si rasmi ah amaah hal sanno ah ugu biiray kooxda Real Madrid.
OFFICIAL: Tottenham ayaa si rasmi ah u la wareegtay ciyaaryahan Clint Dempsey, waxa uu u saxiixay heshiis seddex sanno ah, waxaana ay ku soo iibsadeen 6 milyan ginni.
OFFICIAL: Tottenham oo si rasmi ah u la wareegtay goolhayihii kooxda Lyon iyo xulka France Hugo Lloris, waxa ay ku soo iibsadeen 8 milyan ginni, isagoo u saxiixay heshiis afar sanno ah.
OFFICIAL: Ciyaaryahan Yossi Benayoun ayaa heshiis amaah hal sanno ah uga tagay kooxda Chelsea, waxaana uu ku laabtay kooxdiisii hore ee West Ham.
OFFICIAL: MATIJA NASTASIC ciyaaryahan reer Serbia ayaa si rasmi ah ugu biiray Manchester City isagoo ka soo dhaqaaqay Fiorentina, waxaana dhanka Fiorentina aaday Stefan Savic. Waa saxiixii afaraad ee City ee Maanta ka dib Scott Sinclair, Maicon iyo Wrighty
OFFICIAL: Marseille ayaa heshiis hal sanno oo amaah ah kula wareegtay ciyaaryahanka kooxda QPR Joey Barton.
OFFICIAL: QPR ayaa la soo wareegtay ciyaaryahankii kooxda Marseille Stephane Mbia, isagoo u saxiixay heshiis labo sanno ah.
OFFIACAL: Malaga ayaa heshiis amaah hal sanno ah kala soo wareegtay Manchester City ciyaaryahan Roque San Cruz.
OFFICIAL: Bologan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in xiddigeedii Gaston Ramirez inuu si rasmi ah ugu biiray kooxda Southampton.
OFFICIAL: Marco Borriello ayaa si rasmi ah dib ugu biiray kooxdiisii hore ee Genao, isagoo heshiis aan la cayimin uga tagay kooxda Roma.
OFFICIAL: Luka Toni oo la filayay inuu ku biiro Seina ayaa maskaxdiisa bedelay waxaana uu si xor ah ugu biiray mar kale kooxdiisii hore ee Fiorentina.
OFFICIAL:� Kooxda Bologna ayaa xaqiijisay inay si rasmi ah ugala soo wareegtay kooxda Genao weeraryahan Alberto Gillardino.
OFFICIAL: Chelsea ayaa si rasmi ah amaah ugu fasaxday ciyaaryaahnkeeda da’da yar Gael Kakuta kaasoo heshiis amaah hal sanno ah ugu biiray Vitesse Arnhem.
OFFICIAL:� Juventus ayaa si rasmi ah amaah hal sanno ah ugala soo wareegtay Arsenal ciyaaryahanka reer Denmark Nicklas Bendtner.
OFFICIAL: Swansea ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u la soo wareegtay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Spain Pablo Hernandez oo ay kula soo wareegeen 5.5 milyan ginni.
OFFICIAL: Goolhayihii hore ee England Richard Wright ayaa si xor ugu biiray Manchester City. Waxa uu u fadhin doonaa Joe Hart iyo Costel Pantilimon.
OFFICIAL: Dimitar Berbatov ayaa si rasmi ah uga tagay Manchester United kuna biiray kooxda Fulham, isagoo kooxda reer London u saxiixay heshiis labo sanno ah.
OFFICIAL:� Tottenham ayaa si rasmi ah uga iibisay Rafael van der Vaart kooxdiisii hore ee Hamburg, waxaana uu ciyaaryahanka reer Holland uu u saxiixay kooxda Jarmalka heshiis seddex sanno ah.
OFFICIAL: Giovani dos Santos ayaa ka tagay Tottenham, waxaana uu heshiis afar sanno ah u saxiixay kooxda Real Mollorca.
OFFICAIL: Manchester City ayaa si ramsi ah u la soo wareegtay daafacii Inter Milan Maicon. Waxa ay ku soo iibsadeen 4 milyan Euro.
OFFICIAL: Kooxda Celta Vigo ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiis amaah hal sanno ah kula soo wareegtay weeraryahanka Arsenal Park Chu-Young.
OFFICIAL: Ciyaaryahankii Liverpool Charlie Adam ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Stoke City
OFFICIAL: Kooxda Manchester City ayaa si ramsi ah u la soo wareegtay ciyaaryahankii garabka uga ciyaarayay kooxda Swansea City Scott Sinclair.
Official: Kooxda Fulham ayaa si rasmi ah u la soo wareegtay ciyaaryahankii kooxda Sunderland Kieran Richardson.
Update: Tababare Roberto Mancini ayaa xaqiijiyay in kooxda Manchester City ay maanta ku dhawaaqi doonto shan heshiis.
Official: Kooxda Jarmalka ee Hoffenheim ayaa iska fasaxday ciyaaryahan Ryan Babel ka dib 18 bilood oo uu ku dhibanaa inuu la qabsado kooxda. Ciyaaryahanka ayaa la burburiyay qandaraaskiisa oo dhici lahaa 2013, waxaana uu haatan xor u yahay inuu raadsado koox kale.
Official: Kooxda Champions League ku cusub xilli ciyaareedkan ee Malaga ayaa heshiis hal sanno ah kula soo wareegtay xiddiga reer Argentina Javier Saviola.
Update: Liverpool iyo Stoke City ayaa si rasmi ah uga heshiiyay saxiixa ciyaaryahan Charlie Adam sida ay ku dhawaaqday Stoke, heshiiska waxaa ka dhiman in heshiis shaqsi ah ay la gaaraan ciyaaryahanka iyo inuu maro tijaabada caafimaadka.
Update:� Kooxda Sydney FC ayaa ku dhow inay la soo wareegtay halyeeygii Talyaaniga iyo kooxda Juventus Alessandro Del Piero.
Official: AC Milan ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u la soo wareegtay ciyaaryahankii khadka dhexe ee Manchester City iyo xulka Holland Nigel de Jong.
Update:� Ciyaaryahanka kooxda Ajax� Gregory Van der Wiel ayaa aqbalay dalab ay u soo bandhigtay PSG. Waxa uu caawa tagi doonaa Paris si uu u saxiixo heshiis afar sanno ah oo ku kacaya sannadkii 6 milyan euro. Inter iyo Newcastle ayaa sidoo kale xiiseynayay ciyaaryahanka. Sida ay shaacisay wakaalada warar AFP.
Lama yaabi dooni hadii uu ku biiro Tottenham. Wararka xanta waa ay socdaan. Umana maleynayo inuu Fulham caga dhigtay.
Update:� Aston Villa ayaa laga aqbalay dalab 7 milyan ginni oo ay ku dooneysay weeraryahanka kooxda Fulham Clint Dempsey, kaasoo sidoo kale ay rajo weyn ka qabtay kooxda Liverpool. Weli heshiiska ma uusan dhicin madaam Clint Dempsey uusan heshiis la gaarin Aston Villa, waxaana uu shaqsi ahaan doonayaa Liverpool.
Update: Liverpool ayaa dalab rasmi ah oo amaah ah u gudbisay Chelsea oo ku aadan weeraryahanka reer England Daniel Sturridge. Sida ay ogaatay BBC Sport
Update: Madax kooxda Manchester United David Gill ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in Manchester United aysan iska iibin doonin xiddigeeda Wayne Rooney.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Liverpool Jay Spearing ayaa xaqiijiyay inuu amaah lix bilood ah ugu biirayo kooxda Bolton.
Saaxibkiisa khadka dhexe Charlie Adam ayaa haatan tagay Stoke isagoo tijaabada caafimaadka u maraya. Sida ay baahisay Sky Sports
Nicklas Bendtner ayaa haatan tijaabada caafimaadka u maraya kooxda Juventus, waxaana la filayaa inuu si rasmi ah ugu biiro ka hor maanta inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga.